10 ka Waxyaabood ee xiisaha leh ee uu lasoo laaban doono Horyaalka Premier League+Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
10 ka Waxyaabood ee xiisaha leh ee uu lasoo laaban doono Horyaalka Premier League+Sawiro
(07-09-2017) Todobaadka soo socda waxaa dib u bilaaban doona Horyaalka Premier League dalka England oo la joojiyey kadib markii loo baxay Cayaaraha isreeb reebka koobka aduun 2018 oo ay Cayaartoydu u dheelayeen dalalkooda.
Hadaba Horyaalka Premier League ayaa lasoo laaban doona 10 Wax yaabood oo aad u xiiso badan.
1 Arsene Wenger oo kooxda Bournemouth Sabtiga ku marti gelin doona Garoonka Emirates Stadium Waxaana lasheegayaa in hadii laga badiyo ama xitaa uu bareejo galo uu dhici doono Kacdoonkii ugu adkaa ee looga soo horjeedo.
2 Cayaartoydii ladagaashay kooxahooda ee Taageerayaashu ku tilmaameen eyga in ay la mid yihiin oo ku soo laaban doona kooxahooda markii uu suuqu ku xirmay kuwaas oo kala ah Philippe Coutinho, Virgil van Dijk of Southampton iyo Alexis Sanchez iyada oo lafilayo in qaarkood ay ku orin doonaan Taageerayaasha Todobaadka soo socda daawan doona Cayaaraha England.
3 MANCHESTER CITY iyo LIVERPOOL oo dheeli doona duhurnimada sabtiga xiliga qadada iyada oo ay jirto in labada Macalin ee Pep Guardiola iyo Jurgen Klopp ay dagaal masaxeed isku mariyeen Warbaahinta kulankaas oo ah kan ugu weyn ee dhici doona Todobaadka soo laabshada.
4 Wayne Rooney oo ku soo laaban doona Garoomada xili uu dhexda kataaganyahay fadeexad markii laqabtay isaga oo Cabsan gaarina kaxaynaya waxaa kaloo jira in 2 Todobaad laga ganaaxay Mushaarka kooxda Everton.
5 Alex Oxlade-Chamberlain’oo ka soo muuqan doona Liverpool kadib Go aankii layaabka lahaa ee ku doortay Naadigaas kuna diidey Chelsea oo heshiiska shaqsiga ah lagaartay.
6 Macalimiinta Slaven Bilic West Ham iyo Crystal Palace’s Frank de Boer ayaa Todobaadka soo socda dheeli doona iyaga oo miiska saaran hadii laga badiyana macasalaameyn doona kooxaha ay Hogaamiyaan kadib Guuldarooyin xiriir ah oo ay lakulmeen.
7 Renato Sanches oo ka soo muuqan doona Markiisii koowaad Horyaalka Dalka England isaga oo u dheeli doona Swansea City oo heshiis amaah ah kaga soo qaadatay Bauyern Munich.
8 Mesut Ozil oo lays weydiinayo in uu iska mayri doono Canbaareyntii Kulamadii 3 da ahaa ee uu u dheeley Arsenal iyada oo lagu tilmaamay in uu yahay laysi.
9 Manchester United oo Todobaadka soo socda dheeli doonta iyada oo Horyaalka Premier League ku hogaamineysa Record boqolkiiba boqol ah ma difaacan doonta mise Stoke ayaa galaafan doonta.
10 Taageerayasha Premier League oo ku faraxsan in ay dhamaadeen Cayaarihii isreeb reebka ee hakadka geliyey Cayaarihii xiisaha ku hayey ee u socdey iyaga oo soo buux dhaafin doona Garoomada.
Kulamada Todobaadka soo socda dhici doona.